Ufanele ukuba uyilahle kwakhona nini iMilo yakho? | Martech Zone
Ufanele ukuba uyilahle kwakhona nini iMilo yakho?
NgoLwesine, uJuni 25, 2015 NgoLwesine, uJuni 25, 2015 Douglas Karr
Iqela elivela Cacisa uyilo upapashe le infographic intle inezinye iingcinga malunga nento ekufuneka uyazi malunga nokuyila kwakhona ilogo, izizathu zokuba kutheni kufuneka uyile kwakhona, ezinye zenze kwaye mazingazenzi zokuyila ngokutsha, ezinye zeempawu zokuyila ngokutsha, kunye nengxelo evela kwiingcali zeshishini.
Ntathu Izizathu ezine zokuYila kwakhona iiLogo zakho
Ukudibana kweNkampani Ukudityaniswa, ukufunyanwa, okanye ukuphuma kwezinto kwinkampani kuhlala kufuna ilogo entsha ukubonisa inkampani entsha.
Inkampani ikhula ngaphaya kweZazisi zayo yoQeqesho- kwinkampani eyandisa ukunikezela kwayo, njengokuzisa iimveliso ezintsha, iinkonzo, njlnjl. Ukuyila kwakhona i-logo yazo kunokuba yindlela efanelekileyo yokubonisa ukuvela kwenkampani.
Ukuvuselelwa kweNkampani -Iinkampani ekudala zikho kwaye zisenokufuna ilogo.
Ndingathanda ukongeza esinye isizathu! Iindawo zokujonga eziphathwayo kunye nenkcazo ephezulu yesikrini sedijithali siyitshintshe ngokupheleleyo indlela i-logo yakho ejongwa ngayo. Zihambile iintsuku zokuqinisekisa ukuba ilogo yakho ijongeka intle kumnyama nomhlophe kumatshini wefeksi.
Kule mihla, une favicon iyafuneka kodwa inokujongwa kuphela ngeepikseli ezili-16 ngeepikseli ezili-16… phantse kube nzima ukubonakala kuhle. Kwaye inokuhamba yonke indlela iye kumfanekiso kwisibonisi se-retina kwii-pixels ezingama-227 nge-intshi nganye. Oko kufuna umsebenzi woyilo olungileyo ukuze ulunge. Ukuthatha inxaxheba kwizikrini zenkcazo ephezulu sisizathu esivakalayo, ngokoluvo lwam, ukufumana ilogo entsha!
Ukuba awuyichazanga i-logo yakho kule minyaka imbalwa idlulileyo, ilogo yakho inokuvela indala kuye nakubani na owenza uphando kwi-intanethi (emalunga nomntu wonke!).
tags: ukujonga ngokucacileyouphawu lwe-infographiclogo uyilo kwakhonalogo uyile kwakhona infographicUkuhlaziywa kwakhona
Akulunganga… Awuthethi ngeTwitter ngokwaneleyo